Tsika dzeVenezuela, ndedzipi tsika dzeVenzuelan? | Absolut Kufamba
Venezuela inyika yakapfuma panosanganiswa tsika nhatu seSpanish, zvizvarwa zvemuAfrica. Uye humbowo hweichi chikamu chikuru chetsika nemagariro eVenezuela zvakaunzwa kubva kunze kwenyika, kunyanya kubva kuSpain uye kubva kunyika dzinoverengeka dzemuAfrica. Tsika yechizvarwa yakakanganisawo tsika dzinozivikanwa dzenyika, muchokwadi, parizvino chikamu chakakosha chenyika chinobva iwo akasiyana madzinza emarudzi achiripo muVenezuela, kwatinowana iyo Warao serimwe remarudzi anomiririra yenyika ine Yanomami.
Kunyangwe vanhu vazhinji vachiona tsika netsika zvakafanana, zvinofanirwa kutariswa kuti imwe neimwe yakabva kwakasiyana. Netsika tinogona kufunga maitiro evaVenzuelans vakadaro yakadzika midzi iyo inovazivisa sevanhu. Yakawanda tsika dzeVenzuelan ndezveEuropean, Africa uyezvezvizvarwa zvemo. Nzvimbo yega yega ine tsika dzayo, kuzvipira kune mutsvene, ngano dzakakurumbira uye kunyanya mitambo inozivikanwa inoratidzwa.
Panzvimbo iyoyo tsika dzeVenzuelan Vanoedza kuchengetedza tsika dzakagara nhaka kubva kuvakuru. Chinyakare kuratidzwa kwetsika kunoendeswa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa izvo nhasi zvinotibvumidza kunakidzwa nemitambo, chikafu, zvirevo, zviridzwa, kutamba pamwe nekuwanda kwezvinhu zvinotibatanidza kune zvakapfuura. Pakati petsika dzeVenzuelan tinogona kuwana huwandu hwakanaka hweava vanomiririra nyika dzakasiyana dzinoumba nyika. Muchikamu chino tichaedza kuyedza boka rakamiririra.
2 Nziyo dzechivanhu
4 MaVenzuelan echinyakare matambiro
6 Kuviga kweSardine, imwe yetsika dzeVenezuela
7 Mutsvene Johane mutambo
8 Caracas zvitofu
9 Iyo San Sebastián Yakanaka
10 Papelones kubva kuTacarigua
11 Kushuva kwaKristu
12 Kusvirwa naJudas
13 Hats dzeBud
14 Fodya uye calillas
15 Venezuela tsika dzekugadzira
16 Krisimasi tsika dzeVenezuela
Chinyakare maVenzuelan mapurani mubatanidzwa we tsika yechinyakare yechinyakare pamwe chete netsika dzakasiyana dzinounzwa kubva kunze kwenyika, sezvinoitika kune mamwe maitiro mazhinji enyika. Zvishandiso zvinoshandiswa pamwe nemaitiro anoshandiswa akafanana neaya anoshandiswa nemadzitateguru, asi kuchinjika kune zvakatipoteredza uye shanduko yekunyora yenzvimbo dzavakaiswa.
Matanda, pamwe netsvimbo nehuswa, ndizvo zvinhu zvikuru zvinoshandiswa nemadzinza akasiyana enyika kuti vavake mataundi avanogara uye anowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika. Munzvimbo dzinodiridzwa nenzizi, dzimba dzinoyangarara dzinovakwa pamhenderekedzo yenzizi dzinonzi dzimba dzakaganhurwa uye zvakavakwa nezvinhu zvakafanana nezvakaitika kare.
Munzvimbo dzemakomo, dzimba hadzichisiri denga rekugara ckuva dzimba chaidzo uye kwatinowana patio yepakati, mukoridho une makamuri akasiyana uye mukoridho. Dambudziko nerudzi urwu rwekuvaka mumakomo ndeyekukanganisa kunoiswa nenzvimbo yavanowanikwa.
Zvichienderana nenzvimbo dzakasiyana dzatinoshanyira munyika, angave maAndes, mahombekombe, masango kana mapani, uye zvichienderana nenguva yezuva, tinogona kuziva kuti vagari vacho vanogona sei kuimba nziyo dzakasiyana. Nziyo dzetsika ratidza zviitiko zvinofambidzana nevagari zuva nezuva. Idzi nziyo dzakagadzirwa senge rwiyo rwekuimba runoperekedza mabasa ezuva nezuva evarume nevakadzi vanoita zuva nezuva mumunda. Idzi nziyo dzinobva munguva yekoloni umo varanda vatema vaishandiswa muminda uye ivo vaishandisa idzi nziyo kuratidza kushungurudzika kwavo, mufaro, zviitiko ...
Chinchorro ndiyo chaiyo mambure iyo inorembera kubva kumagumo maviri kurara kana kuzorora kwemaawa, inozivikanwawo se hammocks. Iyo inogadzirwa nemucheka mutsvuku, unoshandiswa zvakanyanya kugadzira akasiyana zvigadzirwa zvemaoko zvemunyika. Iwo echicharros ekutanga akagadzirwa kungofanana neaya azvino uno, achipfuura tambo nhatu dzakakomberedza zvimiti zviviri zvakanamirwa muvhu kuti akwanise kuruka machira uye kukwanisa kuasunga hafu-knot uye kuvaita saizi inodiwa.
MaVenzuelan echinyakare matambiro
Huwandu hukuru hwemitambo yetsika iripo muVenezuela inokonzerwa nekudyidzana kwenhaka yeEuropean, kunyanya veSpanish, pamwe nevemo uye, kusvika padiki padiki, neAfrica. Dhanzi rega rega rine zvimiro zvaro asi zvese ivo vachiri kuchengetedza hunhu hweVenzuelan mestizo, mutendi uye anofara. Iwo anomiririra zvakanyanya emitambo yeVenzuelan munyika iyi maSebucán kana Palo de Cinta, maTuras neMaremare.
Iyo Sebucán kana Kunamatira kwemaribhoni eEuropean mavambo ane kutamba kwakatenderedza muti, kunyanya netsika dzinopemberera kusvika kwechirimo. Las Turas inguva yemashiripiti yekutamba kwechitendero chezvizvarwa mavambo ayo anopembererwa kupera kwaGunyana kusvika tenda zvakasikwa nezvakanaka zvakagamuchirwa sekureba sekukohwa kwave kuzhinji. Pekupedzisira tinowana yekutamba yeMaremare mukuremekedza mufi. Iwo mazwi eaya matambiro akagadziridzwa uye dhanzi rine kutora matanho kuenda kumberi uye kumashure.
Gore rega rega mukupembererwa kweCorpus Christi, uko zvakasimbiswa zvechitendero uye zvemashiripiti zvezvakanaka pamusoro pezvakaipa, mutambo wetsika unoitwa, uchitamba madhimoni anotamba munzvimbo dzakasiyana dzenyika. Madhimoni anomiririra Lucifer kupfeka zvipfeko zvine mavara uye chifukidzo chinomiririra chinangwa chekuzvipira kusakaramende dzvene.
Madhimoni akarongedzwa mumapoka kana munharaunda, vanotakura michinjikwa, rozari kana chero chitendero uye panguva yemutambo vanonamata minamato, kusanganisira misa. Vanopfeka bhurukwa dzvuku, shati uye kape uye zvakare Vanopfeka mabhero uye ruzha rwakarembera kubva pahembe dzavo. Iyo masiki yakagadzirirwa neakashinga mavara uye anotyisa kutaridzika, kana zvirinani ndizvo zvavari kuyedza kuita. Dhiyabhorosi koshitomu inoumbwa nezvakasiyana zvishongedzo senge muswe, iyo mhere, mhosho uye maraca. Kuve tsika inozivikanwa kwazvo munyika yese, tinogona kuwana akasiyana madhimoni ekutamba akagoverwa munyika yese, asi akakosha ndeaya eYare, Naiguatá uye Chuao.
Kuviga kweSardine, imwe yetsika dzeVenezuela
Sezvakaita kuSpain, kuvigwa kwesadhifi chiratidzo chakakurumbira chinovhara kutenderera kwemhemberero dzeCarnival uye ichivimbisa kuti ichapembererwa zvakare rinotevera gore. Mutambo weCarnival unobatanidzwa ne tsika yekudzidzira mbabvu yenguruve inonzi sardine uye inomiririra kurambidzwa kudya nyama mumazuva eLent. Pakutanga zvaifungidzirwa kuti chiito ichi chaive chekukwezva hove dzakanaka uye kubereka mumhuka izvo zvaizovimbisa chikafu chemangwana.
Kufora kwekuvigwa kwesadhi kunotungamirwa nemuchuchisi anoona nezve kuchenesa migwagwa inopfuura nekuvigwa kwesadhi, ichiteverwa nemukomana wepaaritari uye nemupristi anoteverwa nemudungwe wemariro wakaumbwa ngoro yakashongedzwa nezvipiriso zvakasiyana. zvemaruva. Mukati meiyo ichiyangarara chimiro che sardini chinomiririrwa.
Mutsvene Johane mutambo
Inopembererwa seSpain muna Chikumi 24 uye pemberera kuzvarwa kwemutsvene. Iyi mhemberero inounza pamwechete huwandu hukuru hwevatendi uye vanozvipira mumatunhu kwaanopembererwa, sezvo isingapembedzwe zvakaenzana kumatunhu ese eVenezuela. Musi wa24 Chikumi mangwanani-ngwanani, mutsvene akagadzirira kusiya imba yaari kuenda kukereke achiperekedzwa neanozvipira uye nekudaro kusvika kwaitwa misa inopembererwa iyo inotanga kuteedzera ngoma dzinopfuura nemuguta rese, pamwechete pamwe nemusande ari kugamuchira rutendo rwevatendi paanopfuura.
Iyo yechinyakare yekuVenezuela chikafu haina kuzvarwa pakupisa kwevakuru shefu, kana vabiki vemaresitorendi makuru, iwo chaiwo Caracas cuisine Akazvarwa mumusha wevaVenezuela, chibereko chebasa rake uye shungu yekubika uye nekuyedza kuwana zvakazara kubva pachikafu chavakawana kubva kuminda nemhuka. Vakadzi pavakatanga kutora kicheni, chikafu cheCaracas chakatanga nekugadzirwa kwemadhiri uye zvihwitsi, kunyanya apo vashandi vacho vaitarisira kugadzira chikafu, kuyedza kugutsa vatengi.
Kufanana nedzimwe tsika dzeVenezuela, chikafu cheVenzuelan inokanganiswa zvakanyanya neSpanish, MaAfrica uye mune iyi nyaya zvakare yemuno. Chaizvoizvo zvekuVenzuelan ndiro ndiro chibage sandi, nhema sado, aubergine keke ...
Iyo San Sebastián Yakanaka
San Sebastián International Fair ndeimwe yetsika dzakakosha dzeVenzuelan munyika. Inopembererwa muguta reSan Cristóbal, iri mudunhu reTáchira, mumavhiki echipiri aNdira. Zvakare inozivikanwa seBullfighting Fair yeVenezuela Iyo ndiyo mamiriro akakodzera kune vadikani venyika vanorwa nekukwikwidza mombe kuti vanakidzwe nevanorwira bhuru pasi rese.
Iyi yakanaka inokwezva nhamba hombe yevashanyi vekunze uye chiitiko icho inopa mikana yakakura yevaraidzo mudunhu reTáchira semunyika yese, nekuti kuwedzera kune varwi vemombe vanozivikanwa pasi rese, nyanzvi dzepasirese dzinopindawo mudariro, asiri mashoma.
Papelones kubva kuTacarigua
Tacarigua inoumbwa nenzvimbo dzekuredza uye dzekurima dziri pachitsuwa cheMargarita. Kwemakore mazhinji ivo vanga vachigadzira iyo yekushambadzira yekushandisa mukati uye kutengesa kune dzimwe nharaunda. The papelon kunobva nzimbe ine conical chimiro, Inoyera masentimita makumi maviri pakukwirira uye chigadziko chemasendimita gumi kusvika gumi nemashanu. Inowanzo shandiswa kutapira chokoreti kana kofi, kugadzira sewn kana mbishi guarapos ine ndimu.
Nekuuya kweSvondo Dzvene, senge kuSpain, vanamati vanoenda kumachechi kunopa zvipiriso uye zviito zvekurangarira chiito chakaitirwa mwanakomana waMwari nevanhu vese. Asi muVenezuela, kune zvakare kumiririrwa neruzhinji kunotora mazuva ekupedzisira aKristu pasi pano. Mune izvi zvinomiririrwa tinogona kuona Kushushikana uye Rufu rwaKristu, zvinoumbwa nematanho gumi nemashanu anotaura nyaya yaJesu Kristu.
Asi kwete chete Kushushikana uye Rufu rwaKristu zvinomiririrwa, asiwo zviitiko zvekupinda kwaKristu muJerusarema, kuwanda kwechingwa, Chirairo Chitsvene, gadheni remiorivhi, Via Crucis, Kumuka kuvakafa, kurovererwa.
Kupiswa kwaJudas ndiyo imwe yetsika dzeVenezuela dzinomiririra iyo kusagutsikana kwevanhu nezviitiko zvematongerwo enyika pamwe nehunhu hwavo zvakajairika, asi zvakare inoshanda kupedza Lent nekugadzirira kumuka kwake kwegore rinouya. Chikonzero chekupisa uku ndechekurangarira kutengeswa kwaJudhasi naKristu, zvichinongedzera pakutengesa hunhu kwevanhu vake. Chidhori chaJudas chinopisa chakagadzirwa nemachira, tsaru tsaru uye mamvemve, akazadzwa nemafirework, ayo anovhenekerwa kana hosha iyi yakaturikwa ikapiswa.
Hats dzeBud ndidzo Margarita Island ndiyo sosi yekuwana mari. Kunyangwe ichitaridzika, bhuku rekugadzira heti idzi harisi nyore zvachose uye rinoda hunyanzvi hwakawanda kuti ugadzire. Rudzi urwu rweheti rwakave nenguva yakareba kugamuchirwa kukuru munyika uye muzvitsuwa zveCaribbean, asi mumakore achangopfuura kugadzirwa kwakadzikiswa zvishoma, kuchinjika kune zvazvinodiwa zvazvino. Mukuwedzera kune ngowani ine bhudzi, ivo zvakare vanoita mabhegi, matagi, makapisi ...
Fodya uye calillas
Unyanzvi hwekurima nekugadzira fodya hunochengetwa seimwe yetsika dzemhuri yeVenzuelan, kunyangwe mumakore achangopfuura mamwe mabasa ane hupfumi ari kuigadzira. fodya inogadzira chigaro chekumashure. Kugadzirwa kwefodya kwakakamurwa kuita Calilla, kugadzira fodya yakatetepa yezvinhu zvakasarudzwa. Kune rimwe divi tine Fodya, iyo yakanangana nekugadzira muhuwandu hwakawanda uye nguva nenguva. Pakutanga, fodya yaitengeswa munyika yese, asi nekuda kwekudzikiswa kwekudzikiswa, parizvino inongodyiwa muHurumende nenharaunda yeLos Millanes uko kunowanikwa kurimwa kwemuti uyu.
Venezuela tsika dzekugadzira
Pakati pezvigadzirwa zvemaoko zvakagadzirwa muVenezuela tinogona kuwana zvekushongedza, chikafu, zvinwiwa, ceramics, Kesariya, madoro, zvinyorwa, pendi, machira, shangu, zvipfeko, vapfuri vegoridhe, zvishongo, zvinhu zvematanda, hammock, hammocks ... izvi Dudziro yemhizha inobvumidza vagari kuti ratidza nzira yehupenyu nemweya weVenzuelan.
Krisimasi tsika dzeVenezuela
Kuve vanhu vanonamata zvakanyanya, nekusvika kweKisimusi, imwe yetsika dzeVenzuel ndiyo makona ese eVenezuela inogadzirira kuuya kwemucheche Jesu. Pakutanga kwaZvita, mufaro wemisi iri kusvika wave kutanga kuoneka uye misangano, kushambadza matoneti, mhemberero dzekupemberera kuuya kwemucheche Jesu kukona dzese dzenyika dziri kuramba dzichingowanda. Asi pamusoro pezvo isu tinowanawo kumwe kuratidzwa uko mumakosikoni anokwanisa kuwedzera kupemberera kweKisimusi kusvika Kukadzi, senge mabhonasi eKisimusi, muchidyiro, mapombi, mabhonasi eKisimusi, mafaro, mascateboard, matambiro evafudzi, zuva yeVatsvene Vasina mhosva, kuuya kweVachenjeri, gore idzva, gore rekare ...
Tinovimba wakafarira zvese izvi Tsika dzeVenzuelan kunyangwe kana wanga uchiri kuda zvimwe, apa unogona kuverenga izvo zviri tsika muVenezuela zvimwe zvakajairika.
HildA DE MIRABAL akadaro
Ini ndinoda nyika yangu Venezuela, yakanaka, hatifanirwe kuitira chero nyika chero chinhu, nekuti ine zvese, nzvimbo, mahombekombe, makomo, nzizi, nezvimwe. Ini ndinoda nyika yangu, ini handichinje iyo chero chinhu, ndinoda tsika dzayo netsika
Pindura kune hildA DE MIRABAL
brian pinto akadaro
Ino ndiyo nyika inoburitsa mukaka neuchi! Ameni ...
Pindura kuna brian pinto
leanyeli varela guillen akadaro
Q desiccation inosemesa inosemesa matongerwo enyika akanyanya kushata
Pindura kune leanyeli varela guillen
EMMA SANCHEZ GARCIA. akadaro
Mhoro kubva kuTáchira, nzvimbo dzekumira dzakanaka, ndedzangu kumusoro kwedenga ndosaka iri rakanaka, Venezuela yangu, hatifanirwe kuitira chero nyika chero chinhu, nekuti ine zvese, nzvimbo, mahombekombe, makomo, nzizi, nezvimwe. Ini ndinoda nyika yangu, ini handichinje iyo chero chinhu, ndinoda tsika dzayo netsika. Kubva La Grita.
Pindura EMMA SANCHEZ GARCIA.
mwenje angelinys maruva prada akadaro
Mhoro kubva kuMamporal Venezuela inyika hombe kwazvo uye tsika zhinji dzine zvinhu zvakawanda izvo ini neni tese tinogona kunakidzwa nazvo uye izvo zvinhu nzizi, mahombekombe, mapaki, makomo uye zvimwe zvinhu zvakawanda Venezuela ine mureza wayo, rwiyo rwayo uyezve nyika yatove a kuti kuVenezuela haugone kuwana chikafu uye unongonzwa panhau kubirwa kwakachena, zvishoma nezvishoma nyika yangu ichachinja, ndinoziva, uye kwete kumashure asi kumberi uye kune izvo zvoga handidi kuchinja, kunyangwe goridhe Vhenezwera.
Pindura luz luzinys flores prada
Venezuela inyika yakakura kwazvo uye tsika zhinji dzine zvinhu zvakawanda izvo ini neni tese tinogona kunakidzwa nazvo uye izvo zvinhu nzizi, mahombekombe, mapaki, makomo uye zvimwe zvinhu zvakawanda Venezuela ine mureza wayo, rwiyo rwayo uyezve nyika yekumusha yatove muVenezuela Iwe haugone kuwana chikafu uye iwe unongozvinzwa panhau, humbavha hwakachena, zvishoma nezvishoma nyika yangu ichachinja, ndinoziva, uye kwete kumashure asi kumberi uye kune izvo chete handingachinje Venezuela, kunyangwe goridhe. kwandiri pamusoro penzvimbo yedenga ndosaka iri yakanaka, Venezuela yangu, hatifanire kugodora chero nyika chero chinhu, nekuti ine zvese, nzvimbo, mahombekombe, makomo, nzizi, nezvimwe. Ini ndinoda nyika yangu, ini handichinje iyo chero chinhu, ndinoda tsika dzayo netsika. Kubva kuLa Grita.Ndinoda nyika yangu, Venezuela, yakanaka, hatifanirwe kuitira chero nyika chero chinhu, nekuti ine zvese, nzvimbo, mahombekombe, makomo, nzizi, nezvimwe. Ini ndinoda nyika yangu, ini handichinje iyo chero chinhu, ndinoda tsika dzayo netsika
Pindura kuti reicherd
Keudys Garcia akadaro
Nyika yangu ndiyo yakanakisa, ine tsika nemagariro akanakisa
Pindura Keudys garcia
veronica jaramillo akadaro
Mhoroi, ini ndiri Verónica Jaramillo uye ini ndiri Tigres.Ndinoda kurairirwa uku, ndinovimba mapeji ese anga akadaro neakawanda pfungwa.
Pindura veronica Jaramillo
Pindura kuna dannis
Ndatenda nekuisa peji rino
zoraida ramarez akadaro
Zvisinei nemamiriro ezvinhu atinogara, Venezuela ndiyo nyika yakanakisa .. Ndinochida uye ndicharamba ndichienderera mberi .. tsika nemagariro ayo .. Ndiri Andean uye hapana vanhu vakanaka uye vanoshanda nesimba sevaGochos.
Pindura zoraida ramarez
jon mayorca akadaro
Mhoroi, ndiri kutsvaga musikana, toti 33
Pindura kuna jon mayorca
Iyi NETWORK YAKANAKA KUSVIRA KUTI UONE ZVIMWE ZVAKAWANDA ZAVENEZUELA NEMITAMBO YAYO
Ndinoda nyika yangu, ndiyo yakanakisa pasirese uye kunyangwe panguva ino tisina kunyatsonaka, ndinoziva kuti veVenzuelan vachasiya nyika ino… ndiri nenyika yangu…. Tiri varwi vanhu uye tiri kuzozvidzivirira chero zvodii….
johana gonzalez akadaro
zvakanaka kwazvo asi kurudziro haisi iyo papelones deTacarigua, iwo mufananidzo unobva mumusha weQuebrada Negra uri wemuguta reSeboruco, Tachira State
Pindura kuna johana gonzalez
yonelkis ugas akadaro
Ndakafarira chinyorwa ichi… .yakanaka chaizvo uye chokwadika ndinochinamata.Ndinokukorokotedzai imi .... # Amovenezuela
Pindura kune yonelkis ugas
Maitiro ekuenda kubva Havana kuenda Varadero